सेनवंशीय शासनकालमा मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था– एक परिचय - Prateek Daily
सेनवंशीय शासनकालमा मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था– एक परिचय
on 12:05:00 AM0Comment
नेपालको नारायणी अञ्चलको मकवानपुर नामक जिल्ला अठारहौं शताब्दीको मध्यसम्म एउटा स्वतन्त्र राज्यको रूपमा अवस्थित रहेको थियो । यस मकवानपुर राज्यमा सेनवंशका शासकहरू हुने गरेका थिए । मकवानपुर राज्यको स्थापना ईसवीय सन्को तेह्रौं–चौधौं शताब्दीतिर भएको मानिन्छ । मकवानपुरबाट सेनवंशीय राज्यको विस्तार पश्चिममा पाल्पासम्म तथा पूर्वमा विजयपुरसम्म भएको थियो । सन् १७६२ ई.मा गोरखाली शक्तिद्वारा आक्रमण गरिएपछि मकवानपुरको राज्यशक्तिको अस्तित्व समाप्त भएको थियो ।
कालक्रमको सिलसिलामा यस राज्यमा अनेकपटक विभाजन भएर एवं अन्य कारणहरूले गर्दा पाल्पा, विजयपुर, चौदण्डीलगायत अन्य सेनवंशीय राज्यहरू स्थापित हुन पुगेका देखिन्छन् । यस प्रकार अनेक ससाना सेनवंशीय राज्यहरू स्थापित भएबाट एउटा बलियो प्रशासनिक एकाइको रूपमा यस राज्यको स्थिरता कायम रहन सकेको थिएन । राजा मुकुन्दसेनको पालामा सन् १५१८ ई.तिर भएको राज्य विभाजनको आधारमा पाल्पा क्षेत्र अलग भई मकवानपुर राज्यको शासन लोह·सेनको हातमा परेको थियो । राजा लोह·सेन (१५५३–१५९१ ई.)को शासनकालमा मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ रहेको भए तापनि उनको शासनावधिको धेरैजसो समय राज्यविस्तार एवं तिनको सुस·ठनतर्फ लागेको थियो । लोह·सेनको समयमा मकवानपुर राज्यको विस्तार निकै ठूलो भूभागसम्म भएको थियो ।
राजा हरिहरसेन (१६३१–१६७२ ई.)को शासनकालमा मकवानपुर राज्यको विभाजन हुँदा कोसी नदीलाई सिमाना तोकी कोसीभन्दा पूर्वको क्षेत्रमा विजयपुर राज्य निर्मित भएको थियो । यसरी नै सन् १७०७ ई.मा राजा शुभसेनको पालामा उनका दुई छोराको बीचमा राज्यको पुनर्विभाजन हुँदा यसपटक सिमानाको रूपमा कमला नदीलाई तोकिएको थियो । यस प्रकार कमला नदीभन्दा पूर्व रहेको विजयपुर राज्यको सन् १७३५ ई.मा पुनर्विभाजन भएको थियो, जसबाट चौदण्डी राज्यको अस्तित्व स्थापित भएको थियो ।
प्रशासनिक दृष्टिकोणले मकवानपुर राज्यको कोसीदेखि पश्चिमतर्फको भूभागलाई सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट, बारा र पर्सा गरी पाँच जिल्लाहरूमा बाँडिएको थियो । यसरी नै कोसीदेखि पूर्वतिरको भूभागलाई तीन तालुकहरूमा बाँडिएको थियो । विजयपुर (मोरङ) क्षेत्र भनिने यस क्षेत्रमा जिल्ला शब्दको साटो तालुक शब्दको व्यवहार भएको पाइन्छ । यसका साथै मकवानपुर राज्य अन्तर्गत प्रशासनिक दृष्टिले स्थापित गरिएका अनेक गढीहरू रहेका थिए । गढी भनेको किल्ला हुन्छ । यसरी स्थापित गढीहरूमा मकवानपुरगढी, हरिहरपुरगढी, पर्सागढी, बारागढी, सिन्धुलीगढी, उदयपुरगढी, चौदण्डीगढी, विजयपुरगढी आदि रहेका थिए । यस प्रकार सेनकालीन प्रशासन व्यवस्थामा राज्य क्षेत्रलाई जिल्ला, तालुक र गढी भनेर विभाजित गरिएको देखिन्छ । यसका साथै यी जिल्ला, तालुक र गढी अन्तर्गतका भूभागलाई अनेक प्रगन्ना, मौजा र गाउँहरूमा विभाजित गरिएको थियो । यसबाट राज्यको प्रशासनिक कामकाज सुचारुरूपले सञ्चालन गर्न सजिलो भएको थियो ।
मकवानपुर राज्यको सेनवंशीय शासनावधिको प्रशासनिक व्यवस्था विषयक विचार गर्दा यसको स्वरूप केन्द्रीयकृत रहेको पाइन्छ । राजधानीमा रहने गरेका राजा पूर्णरूपले शासन र प्रशासनका प्रधान हुन्थे । सबै प्रकारका प्रशासकीय अधिकारहरू राजाबाट नै निस्सृत हुने गर्दथे । यसका साथै राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थामा समावेश गरिएका सबै प्रकारका सेवा अन्तर्गत कार्यरत रहने व्यक्तिहरू मुख्यरूपमा राजाप्रति जवाफदेही हुने गर्दथे । यसरी नै राज्यद्वारा प्रदान गरिने दानपत्र, बकसपत्र तथा जारी गरिने आज्ञापत्र, नियम इत्यादिसमेत राजाद्वारा नै घोषित हुने गर्दथे । राजालाई केन्द्रीय प्रशासन सञ्चालन गर्ने कार्यमा राज्यका बहालवाला विभिन्न पदाधिकारीद्वारा सहयोग प्राप्त हुने गर्दथ्यो । यस्ता पदाधिकारीहरूमा देवान, चौतरिया, मन्त्री, काजी, ज्योतिष, पुरोहित इत्यादि हुने गर्दथे । यस्तै कतिपय अवस्थाहरूमा राजकुमारद्वारा तथा महारानीद्वारा समेत राज्यको प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिकाको निर्वाह गरिएको पाइएका छन् । यसरी नै राजकुमार शुभसेनलाई महाकुमार शुभसेन भनेर उल्लेख गरिएको पाइन्छ भने राजा इन्द्रविधातासेनकी महारानीद्वारा सैनिकका नाममा आज्ञापत्र जारी गरिएको प्रमाण पाइन्छन् । अर्कोतिर, राज्यको केन्द्रीय प्रशासनमा कतिपय अवस्थामा देवानको पनि प्रधान भूमिका रहेको देखिन्छ । यस प्रकारको देवानको प्रधानता खासगरी विजयपुर राज्यमा बढी देखिन आएको छ ।
राज्यको केन्द्रीय प्रशासन अन्तर्गत नियमितरूपमा सैनिक बल रहने व्यवस्था थियो । यसरी रहने सैनिकहरू दुई प्रकारका हुने गर्दथे । यसमध्ये एकथरी सैनिक बल राजा र राजदरबारको सुरक्षा कार्यमा संलग्न हुने गर्दथे भने अर्कोथरी सैनिक बललाई राज्यका विभिन्न स्थानमा राखिने गरिएको हुन्थ्यो । यसरी रहने सैनिक केन्द्र सरकारको मातहतमा रहने एवं आवश्यक परेको खण्डमा युद्धमा संलग्न हुने गर्दथे ।
मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्थाको मूल आधार भनेको जिल्ला प्रशासन थियो । राज्यको प्रशासनको सबैजसो कुरा जिल्ला प्रशासनमाथि नै निर्भर रहने गर्दथ्यो । जिल्ला प्रशासनका प्रमुख पदाधिकारी सुब्बा हुने गर्दथे । राज्यको लागि राजस्व सड्ढलन गर्ने एवं आफ्नो अधिकार रहने अन्तर्गतको क्षेत्रमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्ने जस्ता कार्य सुब्बाले गर्दथे । यस्तै प्रशासनिक एकाइको रूपमा स्थापित विभिन्न गढीहरूमा पनि सुब्बा नियुक्त गरिएका हुन्थे । मकवानपुर राज्य अन्तर्गत रहेका मकवानपुर, पर्सा, बारा, रौतहट, सिन्धुली, महोत्तरी, सप्तरी, उदयपुर, मोरङ जस्ता गढीहरू वर्तमान नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत जिल्लाको रूपमा स्थापित रहेका छन् ।
सेनवंशीय शासनकालमा स्थानीय प्रशासनको स्वरूप ग्रामीणस्तरको रहेको थियो । यसरी प्रशासनिक एकाइको रूपमा स्थापित मौजाहरू अन्तर्गत अनेक गाउँहरू रहने गरेका हुन्थे । मौजाको अधिकारीको रूपमा जमिनदारहरूको नियुक्ति हुने गर्दथ्यो । जमिनदारले आफ्नो क्षेत्रभित्र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने तथा राजस्व सड्ढलन गरी माथि पठाउने कार्य गर्दथे । यस्तै ग्रामीणस्तरको प्रशासनिक कार्यमा संलग्न रहने अन्य पदाधिकारीगणमा मोकद्दम, पटवारी, मोहरर, कानुनगो, गोराइत आदि रहने गरेका थिए । यस सन्दर्भमा नेपालका राजा गिर्वाणयुद्ध विक्रम शाहको पालामा प्रदान गरिएको विजयपुर–पिण्डेश्वर स्थानमा प्राप्त ताम्रपत्र अभिलेख उल्लेखनीय रहेको छ, जसबाट तत्कालीन प्रशासनिक क्षेत्रमा रहेका अनेक प्रशासकीय पदहरूबारे थाहा पाइन्छ ।
मकवानपुर राज्यको प्रशासनिक व्यवस्था अन्तर्गत न्याय प्रशासन विषयक अध्ययन गर्दा थाहा पाइन्छ कि केन्द्रीयस्तरमा बिचारी नामक पदाधिकारीको नियुक्ति हुने गर्दथ्यो । यसरी बिचारी पदका व्यक्ति न्याय व्यवस्था सम्पादन गर्ने कार्यमा राजालाई सहयोग गर्ने गर्दथे । राज्यमा कुनै पनि अपराधसम्बन्धी विषयमा दण्ड दिने अधिकारको क्षेत्रमा राजाको सर्वोच्चता स्थापित रहेको थियो । अर्कोतिर, जिल्ला क्षेत्रका अधिकारी सुब्बाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र न्याय व्यवस्था सम्पादन गर्ने गर्दथे । सुब्बा र बिचारीका मातहतमा रहने न्याय सम्पादन क्षेत्रसित सम्बन्धित अन्य पदाधिकारीमा द्वारे तथा कोतवाल रहने गरेका हुन्थे । यिनीहरूको भूमिका पनि न्याय प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण हुने गर्दथ्यो । यसका साथै अपराधीलाई दण्डित गर्ने सिलसिलामा सामाजिकरूपमा प्रचलित परम्परागत न्याय व्यवस्था अन्तर्गत रहेर विचार गरिने एवम् अपराधीलाई कसूरको गम्भीरताको आधारमा विभिन्न
२०७६ वैशाखको प्रतीक दैनिक
२०७६ वैशाख ०१ गते आइतवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ वैशाख ०३ गते मङ्गलवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ वैशाख ०४ गते बुधवारको प्रतीक दैनिक
२०७५ चैत ३० गते शनिवारको प्रतीक दैनिक
२०७५ चैत २९ गते शुक्रवारको प्रतीक दैनिक
२०७६ वैशाख ०५ गते बिहीवारको प्रतीक दैनिक
भारतको सुभद्रामाई दर्शन गर्न नेपालीहरूको भीड
प्रेम लामा/ओमप्रकाश चौधरी, ३० चैत/ पर्साको ठोरीसँग सिमाना जोडिएको भारतको सुभद्रास्थित प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थस्थल आदिशक्ति सुभद्रामाई म...
वीचिकालिको नाममा अधिग्रहण ८३३ बिघा जग्गा फिर्ता माग, प्रहरी ज्यादतिविरुद्ध कलमवीरहरू चुप रहेको किसानको गुनासो
रवीन्द्र साह, कलैया, २७ चैत/ भूमि अधिकार सङ्घर्ष जिल्ला कार्यसमिति, बाराका अध्यक्ष मेहीलाल दास थारूले कलैयामा पत्रकार सम्मेलन गरी सरका...
पुस्तकसूची सार्वजनिक भएन, अभिभावक मारमा
प्रस, वीरगंज, २९ चैत/ नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुनै लाग्दा पर्सामा निजी विद्यालयका पाठ्यपुस्तकमा कमिशनको चलखेल शुरू भएको छ । पर्साका निज...
श्रीसिया खल्वाटोलाको जग्गा खरीदकर्ताहरू उपभोग गर्नबाट वञ्चित
प्रस, वीरगंज, २८ चैत/ तत्कालीन वीरगंज नगर विकास समितिले प्लटिङ गरी बिक्री गरेको हाल वीरगंज महानगर–श्रीसिया खल्वाटोलाको जग्गा लामो समय बि...
Archive April (213) March (312) February (381) January (344) December (217) November (182) October (176) September (197) August (199) July (232) June (250) May (212) April (209) March (199) February (213) January (213) December (238) November (208) October (194) September (213) August (198) July (207) June (234) May (224) April (234) March (232) February (274) January (317) December (305) November (255) October (269) September (287) August (241) July (272) June (276) May (265) April (243) March (266) February (253) January (206) December (206) November (233) October (212) September (274) August (228) July (203) June (191) May (218) April (213) March (191) February (209) January (225) December (245) November (184) October (163) September (164) August (178) July (173) June (169) May (168) April (177) March (194) February (161) January (208) December (198) November (149) October (148) September (175) August (201) July (208) June (200) May (218) April (168) March (193) February (194) January (202) December (226) November (186) October (231) September (229) August (199) July (197) June (160) May (192) April (199) March (276) February (627) January (235) December (183) November (158) October (139) September (144) August (149) July (130) June (142) May (132) April (133) March (107) February (139) January (160) December (158) November (132) October (149) September (185) August (166) July (154) June (135) May (33)